Jony Ive mar dambe kuma soo muuqan liistada fulinta ee Apple | Waxaan ka socdaa mac
Jony Ive mar dambe kama soo muuqan liiska fulinta Apple
Waxayna u muuqataa in macsalaamayntii uu ku dhawaaqay bilo kahor mid kamid ahaa naqshadeeye caan ka ahaa shirkadda Apple laga bilaabo markii la aasaasay ay hirgalayso. Websaydhka Apple mar dambe ma muujinayo muuqaalka qofka masuulka ka ah naqshadaha iMac, iPod ama iPhone iyo kuwo kale alaabta taas oo macnaheedu yahay in wixii lagu dhawaaqay bishii Juun ee sannadkan ay ku dhowdahay inay dhaqan galaan, bixitaankii shirkadda Ive ee Apple.
Bayaanka rasmiga ah ee Apple maalintaas kama digin taariikh cayiman wuxuuna sidoo kale xaqiijiyey in shirkadda Cupertino oo ay weheliso Ive, ay sii wadi doonaan inay yeeshaan xiriir wada shaqeyn illaa dhammaadka sanadka. Waxay sidoo kale shaaciyeen in xiriirka labada dhinac uu aad u wanaagsanaa iyo Waxay sii wadi lahaayeen inay ka shaqeeyaan waxyaabaha qaar laakiin aniga oo banaanka jooga ayaa ka badan kan gudaha.
Waa run in marxaladdii ugu dambeysay Ive ay ku xirneed dhismaha beerta cajiibka ah ee Apple Park marka loo eego wax soo saarka shirkadda, laakiin ku jirkeeda dhexdeeda waxay hubaal tahay inay "gacan" u tahay qaar ka mid ah Hadda wuu baxayaa si uu jidkiisa u bilaabo oo ay weheliso Marc Newson oo ku jira istuudiyaha LoveFrom.
Tan iyo 1992, Jony Ive wuxuu ku jiray shirkadda runtiina wuxuu arkay oo bartay waxyaabo badan intii lagu jiray xilligan Apple. Ive iyo Jobs waxay ka badnaayeen koox ka shaqeyneysay wax soo saarka shirkadda iyo in kasta oo ay run tahay in Steve-Jobs oo hadda shaqadiisa laga joojiyay uu aad ugu dhaganaa Ive naqshadihiisa, wuxuu ka mid ahaa kuwa yar ee ku guuleystay inuu naftiisa sida ugu fiican uga soo baxo. Waqtiga iyo waqtiga oo la waayo, naqshadeeyaha halyeeyga ah ayaa soo galay xarunta Apple illaa uu ka noqday madaxa naqshadeynta shirkadda, goobta uu hada ku dhawaaqayo bixitaankiisa waxaa degan Jeff Williams.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Jony Ive mar dambe kama soo muuqan liiska fulinta Apple
Outlook.com hadda "waa lagu rakibi karaa" macOS
Disk A floppy saxeexay Steve Jobs ilaa xaraashka